२ वर्षदेखि सम्बन्धमा रहेका लेस्बियन जोडी दिदीबहिनी परेपछि ! – Dcnepal
२ वर्षदेखि सम्बन्धमा रहेका लेस्बियन जोडी दिदीबहिनी परेपछि !
प्रकाशित : २०७९ असार ९ गते १२:४८
काठमाडौं । दुई वर्षदेखि एकअर्कालाई डेट गरिरहेका दुई क्यानेडियन युवतीहरू आफूलाई दिदीबहिनी ठान्छन्। किनकी उनीहरुलाई थाहा छ कि उनीहरुका आमाहरुको एउटै पुरुषसँग सम्बन्ध थियो । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई आफूहरू सौतेनी दिदीबहिनी भएको आशंका छ । पुष्टि गर्नका लागि अब दुबै केटी साथीले आफ्नो डीएनए परीक्षण गराउने निर्णय गरेका छन् ।
डेलीमेलका अनुसार एकअर्कालाई डेट गरिरहेका गर्लफ्रेन्ड कार्ली र मर्सिडिजले केही दिनअघि आफ्ना आमाको सम्बन्ध एउटै पुरुषसँग भएको थाहा पाएका थिए । त्यसपछि उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट गर्दै आफ्नो समस्या सेयर गरेका हुन् । कार्ली र मर्सिडिजको यो भिडियो इन्टरनेटमा लाखौंले हेरिसकेका छन् । उनीहरूको टिकटक अकाउन्टमा यो भिडियो ५६ लाखभन्दा बढीले हेरिसकेका छन् ।
@carleyandmercedes Should we takeaDNA test? #siblingsordating #fyp #foryou #wlw #xyzbca ♬ original sound – szasgrandchildren
भिडियोमा गरिएका टिप्पणीहरूमा मानिसहरूले भने कि कार्ली र मर्सिडीज साँच्चै दिदीबहिनी हुन सक्छन् । किनकी दुबैको अनुहार एकदमै मिल्दोजुल्दो छ । कार्ली र मर्सिडीज हाल उनीहरूको डीएनए परीक्षण रिपोर्टको लागि पर्खिरहेका छन्।
भिडियोमा कार्ली र मर्सिडीजले प्रशंसकहरूलाई पनि सोधे कि यदि तिनीहरू दिदीबहिनीहरू हुन् भने एक अर्कालाई डेट गर्न ठीक छ कि छैन । यो प्रश्नमा मानिसहरुले फरक फरक प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘यो एकदम मान्य छ, दिदीबहिनी तिमीहरू संयोगवश छौ, तर तिमीहरूले छनोटबाट प्रेम गरेका छौ।’